Haddii Aadan Rabin In Ninkaaga/Xaaskaaga Ay Ku Nacdo Ha Sameynin Arrimahan | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Haddii Aadan Rabin In Ninkaaga/Xaaskaaga Ay Ku Nacdo Ha Sameynin Arrimahan
Aayaha editor Send an email September 17, 2020
Waxaa jiraan waxyaabo sababa in ninkaaga/xaaskaaga ay ku nacdo isla markaana guurku burburo. Xiriirada qaar si wanaagsan ayay u socdaan waxayna noqdaan kuwo waqti dheer jiro halka kuwa kalana ay muddo yar jiraan, qaarna ay si dhaqsi ah u dhamaadaan. Waxaa jiraan sababo kala duwan oo xiriirada qaar muddo dheer ama muddo yar ay u jiraan.
Mid ka mid ah sababahan ayaa ah sida lamaanaha xiriirka leh ay u dhaqmaan iyo waxa ay isku sameeyaan.
Waxyaabahan qaarkood waxay gacan ka geysan karaan xiriirku inuu sii xoogeysto halka qaarna ay sababi karaan lamaane inuu bilaabo inuu naco midka kale ee waxyaalahaas sameynaya.
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha keeno in ninkaaga/xaaskaaga ay ku nacdo.
1. Ku hanjabid Furriin/Kal tag
Ku hanjabidda furriin ama inaad lamaanahaaga kala tageysaan kadib xiriir wanaagsan oo aad lahaydeen lamaanahaaga waa waxa ugu yar ee la sameeyo markaad murantaan.
Muranka u dhexeeya lamaanayaasha markasta wuu dhacaa mana jiro xiriir ama guur midna oo ka madhan muran.
Lamaanayaasha is khilaafsan waa inay raadsadaan qaabab macquul ah oo lagu joojiyo khilaafaadka ama muranka noocaas oo kale ah isla markaana midba midka kale raaligeliyaa intii uu ugu hanjabi lahaa inay kala tagayaan. Maalin maalmaha ka mid ah, lamaanaha aanan ku hanjabin furriin iyo wax lamid ah ayaa noqon kara midka ugu dambeeya ee joojiya xiriirka.
Xiriiro badan maanta ma sii waaraan sababo la xiriira maslaxadda oo meesha ka baxdo.
2. Ku mashquulid taleefan
Tiknoolajiyadda maanta waa wehelka dad badan. Baraha Bulshada, wararka, madadaalada iyo waxyaabo kale oo fudud ayaad kala socon kartaa taleefankaaga.
Dad badan waxay aad ugu mashquulaan aaladaha mobilada iyagoo gabi ahaanba aanan arkin joogitaanka lamaanayaashooda.
Tani mararka qaar waxay horseedi kartaa dagaal dhexmara lamaanayaasha gaar ahaan marka midkood iskudayo inuu wadahadal muhiim ah la yeesho kan kale ee ku mashquulsan moobilka. Arintaan ayaa waxay sidoo kale keeni kartaa in lamaanuhu ay isnacaan isla markaana lamaanaha kale uu bilaabo inuu raadsado meel kale.
3. Lamaanahaaga oo hadalka aad ka jarto
Tani waa dabeecad aad u dhib badan oo ka careysiisa dadka badankood. Goynta sheekada ama hadalka qof waa mid edeb daro ah oo ka careysiin karta qofka.
Markuu lammaanahaagu isku dayayo inuu ku dhawaaqo ra’yigiisa, haka jarin xittaa waxa aad rabto inaad dhahdo haddii ay muhiim yihiin. Noqo dhageyste wanaagsan oo faham dhamaan waxyaabaha lamaanahaagu uu leeyahay taasoo ka dhigi karta lamaanahaaga mid ku jeclaado sababtoo ah dadku way jecel yihiin qofka ah dhageyste wanaagsan.
Nin “Shaqada looga ceyriyay jaceyl dartii”